Sidee baan jar karaa Video A duubay PS4
> Resource > Video > Sida loo Edit Videos duubay PS4
La mid ah si ay u Playstation 3 (PS3), waxaad weli la bixiyaa fursad u xaalkaa videos aad duubay Playstation 4 (PS4) ka hor inta aadan geliyaan ama waxaa la wadaag saaxiibadaada. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u timid laga yaabaa in ay dareemaan in muuqaalada tafatir ah waxaa laga yaabaa in xoogaa yar oo dheeraad ah oo ku shubay Bannaankii Webi ama xanibaada. Bal aan fiirino ku saabsan sida aad si dhab ah u samayn kartaa, waayo, Xulashada 1: Iyada oo Button SHARE ama; Xulashada 2: Features ayeey dheeraad ah .
Xulashada 2: Features ayeey dheeraad ah
Waxaa intaa dheer ah quruxsan nidaamsan u PS4 ee DualShock 4 xukuma. Sida lagu muujiyey by shaashada ku lifaaqan, waxaad si fudud u riixi kartaa ka SHARE button kaas oo markaas aad u horseedi doonaa in interface Share ee (sida ku cad Tallaabada 1). I rumaysta, waa run ahaantii anfacaya!
Fiiro gaar ah : Waxaad mar walba ka bedeli kartaa, ama qarka u saaran reserved ka SHARE goobaha button ee ka Share ee interface ( Share Settings ).
Soco in ay doortaan Upload Video clip oo waxaan idin ​​geeyn doonaa ee gacanta . Ka dib markii in, waxaad ka hor tegi karin iyo dhirta ku dhex duubay video clips ka dibna si fudud u dooro file adigoo gujinaya ku yaal hal mar. Haddii aad hore u PS3 loo isticmaalo, waxaad ka ogaan doonto in ay si deg-deg si aad u hesho in ay tallaabadaas.
2 goo iyo Xiisaha Leh
Guji Edit inuu ku soo bilowdo sixiddiisa aad PS4 diiwaan videos. Nasiib darro, waxaad jar karaa oo keliya video clips ay ku daray bilowga iyo dhamaadka dhibic. Waxaad dooran kartaa in aad xaalkaa clips ku salaysan horena u ahaa dura ka mid ah (ie 1, 5, 10 ilaa 60 seconds). Marka iska jaro, si fudud Guudmar aad clip.
3 Share gal Facebook
Dabacsanaanta ee la wadaago aad PS4 duubay video clips (ama clips saxar) gal YouTube aan hadda taageeray. Habkaani dib ugu casriyaynta mustaqbalka u yimaadaan oo ay sabab u tahay baahida loo jecel yahay. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa aad gali kartaa rogtid oo aad xisaabta Facebook. Magaca aad video clip oo ka dhacay Share la comments socda.
4 LIVE Broadcast (optional)
In PS4 ugu dambeeyey, aad haatan baahin kartaa gameplay NOOSHAHAY labada Ustream ama dhifasho. Gal-in in aad xisaabta ama is-qorto, waayo, mid ku haboon la guide on-shaashadda. Xusuusnow in aad uncheck sanduuqa makarafoonka iyo faallo bandhigay shaashadda haddii aad jeceshahay in aad sii qulquli waxaa aan. Waxaad noqon kartaa dib mar kasta oo aad dareentid in aad rabtid.
Waxaad u baahan doontaa in aad xaalkaa PS4 videos diiwaan on boosteejo kale haddii aad raadineyso weeyna muuqaalada tafatir dheeraad ah. Fiiri ku software 5 sare talinayaa in aad ka bixin karto waxa aad u baahan tahay, ama laga yaabee in dheeraad ah! The Wondershare Video Converter Ultimate bay idiin ahaan lahayd mid ku haboon hadii aad raadineyso weeyna interface ah user-friendly badan in ay bixiyaan laakiin la awoodi karo waqti isku mid ah. Milicsiga dhex sifooyinka muhiimka ah ee ku qoran hoos:
Features Key of Video kama dambaysta ah ee Converter
Taageerada ilaa 150 qaabab kala duwan,
30 jeer ka dhakhsi ee xawaaraha diinta,
Tayada sameecadda ah,
Muuqaalada tafatirka Standard dhisay-in,
DVD gubashada ama abuurka,
Download Direct ka soo goobaha geeyo,
Socon u alaha Facebook, YouTube iyo iwm,
Transferrable gal kombuyuutarrada gacanta ku dhowaad dhammaan loo jecel yahay.
Sida loo Pre-si Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah Wixii Christmas?